Arrinta Saylac Waa Sheeko Isaaq (Habar-Awal) | Xeegonews.com
Arrinta Saylac maaha sida la moodayo. Maaha arrin ay soo maleegeen beesha Ciise. Waa arrin ay soo unkeen beesha HabarAwal oo hogaaminaysa siyaasad sal balaadhan yoolkeeduna yahay dhul balaadhsi.
Sida laga warqabo, arrinta Saylac waxay soo shaacbaxday markii socdaal kadis ah Jabuuti uu ku tagay Madaxweynaha Maamulka Somaliland. Intii Jabuuti u joogay wuxuu shir xasaasi ah la galay shaqsiyaad HabarAwal ah oo reer Jabuuti ah oo u hogaaminaayay Gudoomiyihii Baanka Dhexe ee dhawaan geeriyooday Jamac Maxamuud Xayd. Shirkaas waxaa qayb ka ahaa rag ganacsato waaweyn ah oo uu ka mid yahay Maxamad Aw saciid iyo Ina Geele Arab iyo Cali Cabdi oo ah wasiirkii hore ee Isgaadhsiinta Jabuuti haddana ah xildhibaan kana mid ah gudiga sare ee Xisbiga RPP ee Madaxweyne Geele hogaamiyo.
Shirkaas isaga ah ayaa Siilaanyo lagu qanciyay in natiijada doorashada Saylac tahay mid aan dan u ahayn qorshaha siyaasadeed ee Isaaq. Sidaa awadeed Siilaanyo waxaa laga dalbay inuu Maayarka Saylac gacanta ka saaro beesha Ciise.
Markii doorashada la diyaarinaayay kooxda HabarAwal ee Jabuuti waxay dajiyeen qorshe musharaxiinta Ciise lagu ururiyo lagana sharaxo xisbiga Xaqsoor, xisbigaa oo u maalgaliyay ganacsadaha beesha Arab ka soo jeeda ee Ina Geele ee CEO ka ah Shirkada Inchcape ee Jabuuti. Beesha Ciise gaar ahaan reerka Mamaasan Jabuuti kama abaabulin olale doorashada dawladaha hoose xoog loogaga qayb galo oo dad laga saaro Jabuuti. Nimanka reer Jabuuti ee soo maleegay arrintan ismay laheen natiijo ajandahooga barbar marsan ayaa soo bixi doonta, waana ta keentay in doorashadoo dhamaatay ay cadaadis ku saaraan Siilaanyo inuu afgambiyo natiijadii xaqa ahayd ee soo baxday.
Ujeedada Habar-Awal Saylac ay ka leedahay waxay la xidhiidhsan tahay ajandahooga ay ka leeyihiin degmada Gabiley iyo hindisahooga amba damacooga dul saaran dhul ka mid ah degmada Lughaya. Habar-Awal yoolkeedu mid qarsoon maaha. Waxaa marka hore la damacsan yahay in Degmada Gabiley laga tirtiro Gadabuursi, dabadeedna la qabsado deggaanada guban ee Gadabuursi ee ka tirsan degmada Lughaya iyo Baki. Arrintaa iyada ah waxaa markhaati u ah sida edeb darada ah ee musharaxiintii Gadabuursi ee doorashadii degganka ee Gabiley loogu boobay, arrintaas oo ay ka taliyeen siyaasiinta ay ka midka yihiin Abiib TimoCade. Ajandahaa Habar-Awal ku taamayso waxaa ka qayb ah dhismaha “Dawga Cad” ee lagu talo jiro in Jabuuti la gaadhsiiyo.
Dhinaca kale, waxaa wax lala yaabo, ruwaayada maamulka Somaliland ka wado magoolada Saylac ee koox wasiiro ah ay sheekada u dhigayaan in labo qabiil meesha isku hayaan. Waxaa wax lalo yaabo ah natiijo doorasho oo la wado in wax sharciga barbar marsan lagu badilo oo waliba la leeyahay beeshii cadhaysnayd ayaa diidan oo weli ku taamaysa jagada Mayarka. Waxaa wax lala yaabo ah maantana in la yidhaa Abiib Timocade ayaa arrinta galaaya tiiyoo la ogyahay wuxuu ka yeelay doorashadii Gabiley markuu amarka ku bixiyay inaan la ogolaan musharax Gadabuursi ah oo Gabiley ka soo baxa. Habeenimadii la tirinaayay doorashada Abiib Timocade waa ninkii yidhi :” Kaartadu si ay inoogu meel marto aan soo saarno akishe iyo madigaan laakiin magaca Gadabuursi hay maqashiinina”. Ninkaas oo ka mid ah raga wada siyaasada yoolka u ah Habar-Awal kuna xidhan ilmaadeeradiisa reer Jabuuti ayaa arrinta Saylac waxka soo maaraynaaya, waxay la mid tahay Dhakhtar xanuunka isagu fidiya oo dawo laga sugaayo. Abiib TimoCade iyo Duur waxay Saylac ka wadaan, Gabiley ayay ku sugaysaa. Maayar ku xigeen hadday ku qancinayaan reer meesha ka maqan, maxay ugu talo galeen inay ku qanciyaan Gadbuursigii Gabiley lahaa ee dharaar cad la boobay? Ayaa la nacasaynayaa?
Si kastaba ha ahaatee, waxaa shiki ku jirin in arrinta Saylac tahay mid awwal ilaa aakhir ay soo maleegeen Habar-Awal, Siilaanyo-na laga iibiyay, Gadabuursina lagu jitaabinaayo. Magaca Ciise-na waa mid lagu adeegsanaayo, waayo Ciise waa ogyahay inuuna marnaba hawaysanayn inuu doorasho kula tartamo Gadabuursi. Ciise deggaanka u sheeganaayo wuxuu ka helay hal xidhibaan oo golaha Wakiilada ku jira, kaasoo waliba ku soo baxay habkii liiska oo la soo xambaaray. Gadabuursina wuxuu halkaa ka helay lix xildhibaan oo golaha wakiilada ku jira. Duur ma wuxuu garan waayay inuu dhowrka nin ee Ciise su’aashaa waydiiyo? Maya, balse wuxuu wadaa ajandihii Siilaanyo soo faray ee isagana lagu soo amaray.
Shaqsiyaadka Ciise ee lagu adeegsanaayo ha isweydiiyaan waxay 35 sannadood dawlada Jabuuti wax uga qaban wayday gobolka Saylac oo maanta ka sii hooseeya sidii Ingiriis ku ogaa. Intii Ilaahay dul dhigay ayaa joogta reerkii Ciise ee u badnaa Ciisaha degga Somaliland oo ah Mamaasan halkuu joogo waa la ogyahay iyo sobobtuu dhulka uuga tagay. Kii abtirsiin u lahaa waa ka ilaa maanta dul saaran. Haddii Ciise goobta joogana wakhti hore ayay dawlada Jabuuti hanti galin lahayd degmada Saylac.
Maamulka Somaliland wuxuu galay khaladkii siyaasad ahaan ugu xumaa ee soo afjaraayay jiritaankiisa. Somaliland wax kaliya iyaa raasamaal u ahaa, waana nabad. Nabadiina farsamo xumo Isaaq ayay eeday. Hase ogaadaan in nina dhulkiisa laga hoos siibi Karin. Saylac-na waa saleelee, waa inoo Laag-Barako iyo Wajaale.